पललाई निस्किन नदिन यस्तो सम्म गरिँदैछ?? मेरो भाइलाई १० बर्सन्नै थुन्ने भए भन्दै पलकी दिदीको रुवाबासी, (हेर्नुहोस भिडियो) – Anautho | Mithilanchal Today
Home रोचक पललाई निस्किन नदिन यस्तो सम्म गरिँदैछ?? मेरो भाइलाई १० बर्सन्नै थुन्ने भए...
पललाई निस्किन नदिन यस्तो सम्म गरिँदैछ?? मेरो भाइलाई १० बर्सन्नै थुन्ने भए भन्दै पलकी दिदीको रुवाबासी, (हेर्नुहोस भिडियो) – Anautho
३१ बैशाख २०७९, शनिबार ०९:३५
याङजी लामा एक प्रखर व्यक्तित्व हुनु हुन्छ। उहाँ भन्नु हुन्छ “”मेरो भाईलाई १० वर्षमै थुन्छ्न जस्तो भान भइसक्यो। दिनै पीछे कुरा फेरी रहनु हुन्छ। आज सुनुवाई हुन्छ भन्यो फेरी अर्को दिन भन्नु हुन्छ। यस्तो भै रहदा एउटा कलाकार यत्तिका दिन सम्म ४ दिवाल भित्र बसिरहँदा कस्तो हर्ट हुन्छं होला?? अझ कोही पनि कलाकार पललाई भेट्न नजानु पनि दुर्भाग्य भएको छ। “”
नेपाली म्युजिक भिडियो क्षेत्रमा एक छत्र राज गरेका अभिनेता पल शाह वि’वादको विषय बनिरहेका छन् । एक नाबालिग गायिकामाथि कर””णी स म्बन्धी क सुरमा उनीविरु””द्ध जाहेरी दर्ता भएसँगै उनी वि”वाद को केन्द्रमा रहेका हुन् ।
जाहेरीमा शाह ले म्युजिक भिडियो सुटिङका क्रममा ती नाबालिग माथि कर”णीको प्रयास गरेको र अन्त्यमा विवाहको प्रलोभन देखाइ तनहुँमा कर””णी गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
बाकी अरु समाचार हेर्नको लागि भिडियो हेर्नुहोस
पछाडि पोस्टपराग अग्रवालले निकाले ट्वीटरका दुई म्यानेजर « Tech News Nepal
अगाडि पोस्टभोट हाल्न पाईन भन्दै वकिलसँग भ’क्का’नि’ए पल साह, मलाई छिटो निकाल्नुस् भन्दै मागे हारगुहार, (हेर्नुहोस भिडियो) – Anautho
` आइ लभ यु ´ मुटुको टुक्रा भन्दै फोन देखाउदै यसरी श्रीमान र छोरिले अनितालाई खुसि बनाए ( हेर्नुस् भिडियो ) – Anautho